Online Juction Feed: 2015-02-01
मेरो पहिलो प्रेमपत्र (my first love letter)
मायाको सौगात स्वरुप कयौं दिनदेखि मनभित्र गुम्सिएर रहेको कयौं प्रश्नको गाँठो फुकाउन जरुरी ठाने र यस्तो चेष्ता गर्दैछु, प्लिज नेगेटिभ नसोंचिदेउ ल ।
मेरो मन किन यसरी मूर्ख बनिरहेको छ ? जीवनमा पहिलोचोटि तिम्रो नाउँमा प्रेमपत्र कोर्दैछु मात्र तिम्रो न्यानो साथको र सहयात्राको झिनो आशमा । सायद, तिम्रो मायामा म नजानिँदो तरिकाले फस्दैछु र अब मलाई साहरा दिएर विज्ञ बनाउने मात्र तिमी छौ यो सिङ्गो संसारमा । के मेरो समीपमा आएर मेरो निस्चल प्रेम स्वीकार्छौ तिमी ? भन्थे भन्नेले, माया बस्न मात्र एक नजर नै काफी छ, यो संसार मायाँनै मायामा अडेको छ तर म त्यसको प्रतिकार गर्थें, वाहियात ठान्थें । सोच्थेँ, यो त सब भ्रम हो । मायाँ, प्रेम, साथ, सहयात्रा, भावना अनि सम्वेदना केहीमा विश्वास थिएन मेरो । अरूले गर्ने प्रेमील र भावनात्मक कुरामा कहिल्यै विश्वासै लाग्दैनथ्यो तर आज तिम्रो प्रेमले मेरो आँखाको पट्टी खोल्दियो अनि यो प्रमाणित भयो म गलत रहेछु । तिम्रा ती नसालु नयन अनि निष्चल भावनको सामु म पराजित अनि झुक्न पुगें । तिम्रो एकै नजरले मैले आफूलाई गुमाउन थालेछु । म नजानिदो पाराले तिमीतिर तानिएँ । तर तिमी... ! खैर, तिमी त यो मेरो प्रेमबारे अनभिज्ञ छौ । अचम्म लाग्छ, किन मेरा यी नयन खाली तिम्लाई नै खोजिरहन्छ ?, किन मेरा कान तिम्रै आवज सुनिरहन मन लाग्छ ? अनि किन मेरा तन मन तिम्रै स्पर्श चाहिरहन्छ ? तर जब तिम्रो सामिप्यमा पुग्छु अनायसै झुक्छन् मेरो शिरहरु ?, थरथरी काँपेर शिथिल हुन्छन् मेरा शरिरहरु । के तिमीलाई मेरो यो अवस्थाको आभास हुँदैन ? कि तिमी बेवास्ता गरिहेको छौ जानीजानी ? म तिम्रो नशालु आँखाको महासागरमा डुब्न चाहन्छु, हराउन चाहन्छु तिम्रो प्रेममा, अनि भुल्न चाहन्छु आफूलाई अनि सारा दुनियाँलाई पूर्ण रूपमा समाहित भएर, बस् पूर्ण रूपमा समाहित भएर केवल तिमीसँग ।
कोलाहलमय कलेजको वातावरणमा कयौंपटक तिम्लाई चोरी चोरी नियाल्थें जब तिमीसँग आँखा जुध्थ्यो मेरो सातो पुत्लो जान्थ्यो । जब तिमी मुस्कुराउँथ्यौ म तिमीसँगको सामिप्यताको कल्पनामा आफ्नो भविष्यको कल्पना गर्थें । मनमनै प्रण पनि गर्थें जब तिमी कलेजमा नयाँ क्लासमेट बनेर आयौ तब यो सुन्दरी युवती, यो सुकोमल युवती जुन मेरो मनलाई पहिलो नजरमै घायल बनाउन सकेकि छे भ्यालेनटाइन डे मा प्रपोज गरेरै छोड्छु चाहे मलाई अवहरा बदमास भनेर दुनियाको सामु झापड नै किन नहानोस् । ती नीलो सागर सिंगै बोक्ने तिम्रो नयन, त्यो हँसिलो र प्रज्वलित मुखमण्डल अनि मधुर मुस्कान देख्दा लाग्थ्यो तिमी मानव नभएर साक्षात ईश्वरको प्रतिबिम्ब हौ । तिम्रो निकटता कल्पिँदा संसारका सबै सुख र खुसीहरु मेरा पाउमा झुकिरहेका छन् झैँ लाग्थ्यो । आझिर के छ खास तिम्रो मुस्कानमा, जसले हरक्षण मलाई पागल अनि एकोहोरो बनाउँदै लगिरहेको छ तर यो पागलपन, उफ ! कस्तो आनन्दको आभास । तिमीलाई एउटा कुरो भनौं ? कसम मेरा आँखाहरू तिमीलाई नै खोजिरहन्छन् हरपल, हरक्षण । तिमी हिँड्ने बाटोमा मेरा नजर बिछ्याएर बसिरहन्छु म केवल तिमीलाई लुकेरै नियाल्न । मैले लिने हरेक श्वासमा तिम्रो प्रेमको मीठो वासनाको अनुभव गर्छु म । मेरो मुटुको हर धड्कन तिम्रै नाममा धड्किरहेका हुन्छन् । यी ओठ, केवल तिम्रो नाम पुकारिरहेका हुन्छन् । के तिमीले सुनेका छौ मेरो दिलको आवाज ? मेरो मनमा प्रवाहित तरङ्ग तिम्रो मनसम्म आइपुगेका छन् ? तर जेहोस्, म यो सानो पत्र तिम्रो नाममा कोर्दैछु, एउटा झिनो आशमा कि तिमीले एकदिन मेरो भावना बुझ्नेछौ, मेरो मनको चाहनालाई चिहान बन्न दिनेछैनौ । तर, यो त मात्र मेरो मनको चाहना न हो, जुन पूरा नहुन पनि सक्छ । तिमी विश्वास गर या नगर मेरो माया सागर जस्तो निर्मल अनि पवित्र छ, छहारी जस्तो शितल छ, वसन्तको सौन्दर्य जस्तो मुलायम छ, गोधुली साँझ जस्तो शान्त छ अनि सुधा जस्तै अमर छ । तर मेरो मायालाई स्वीकार गर्नु या नगर्नु त्यो त तिम्रो इच्छा को कुरो हो । तिमीले स्वीकार्‍यौ भने संसारको सबैभन्दा धेरै र ठुलो खुसी मिल्नेछ मलाई । तिम्रो न्यानो काखमा असीम माया पोखिदिनेछु छताछुल्ल हुने गरी, अनि हराउनेछु तिमीभित्र । अस्वीकारै गरेपनि म दुःखी हुने छैन । मलाई थाहा छ, तिमीलाई निस्वार्थ प्रेम गरेको छु मैले । मेरा हरेक श्वासका झोंक्का तिमीप्रति समर्पित छ । अनि अत्यन्तै प्रगाढ र गाढा । म मेरो अन्धो प्रेमलाई एकोहोरो भएपनि कहिल्यै मर्न दिने छैन, मेरा हरेक अवयवहरुमा सञ्चित गरेर गरेर राख्नेछु अनि जिउने प्रयास गर्नेछु तिम्रै प्रेममा । यदी मरिहालेछु भने पनि जुनकीरीझै तिमीलाई उज्यालो दिइरहने छु । मेरो मायामा स्वार्थ नै छैन अनि मैले तिमीलाई जबर्जस्ती पाउने चेष्ठा गरेको पनि छैन । मेरा लागि प्रेम आत्मिय बन्धन हो जहाँ हार्ट टु हार्ट कनेक्सन हुन्छ, जहाँ मनसँग मनको गहिराइ नापिन्छ र यो अटुट रहन्छ । के तिमी मेरो यो मिठो अनुरोध स्वीकार गर्छौ ? तिम्रो मायामा रम्ने हक दिन्छौ मलाई ? म तिम्रो जवाफ पर्खिरहनेछु, कालान्तरसम्म अनि यही निस्वार्थ प्रेम गरिरहनेछु तर एउटा कुरा यदि तिमी कसैमा समर्पित छौ भने आइ एम सरी म त्यो प्रेम गर्न सक्दिनँ किनकि म अर्काको मायाको महल भत्काएर आफ्नो संसार जमाउन चाहन्छ । एउटा गुलाफ दिएर बदलामा कसैको मन पाइने भए संसारका अधिकांश बगैँचा बाँझा हुनेथिए होलान् त्यसैले मैले त केवल दिँदैछु एउटा प्रेमपत्रको उपहार ता कि फुल पनि फुल्न पाओस् तिम्रो मनमा पनि म बस्न सकूँ । मुखमा रामराम गरि पेटमा छुरा हान्दिन म माया नाप्ने यन्त्र भए भए देखाइदिन्थें नापेर कोहीकोहीलेझै बाह्र सत्ताइस कुरा जान्दिनँ म अहिलेलाई बिदा ।
कृष्ण धरावासीको उपन्यास "आधा बाटो" - Download
"आधा बाटो" कृष्ण धरावासीद्वारा लिखित नेपाली उपन्यास हो । उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुतिसंवेगबाट प्रसारित "आधा बाटो" अच्युत घिमिरेको आवाजमा डाउनलोड गर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् :
1. आधा बाटोको पहिलो श्रीङ्खला डाउनलोड गर्नुहोस्
2. आधा बाटोको दोस्रो श्रीङ्खला डाउनलोड गर्नुहोस्
3. आधा बाटोको तेस्रो श्रीङ्खला डाउनलोड गर्नुहोस्
4. आधा बाटोको चौंथो श्रीङ्खला डाउनलोड गर्नुहोस्
5. आधा बाटोको पाँचौं श्रीङ्खला डाउनलोड गर्नुहोस्
6. आधा बाटोको छैटौं श्रीङ्खला डाउनलोड गर्नुहोस्
7. आधा बाटोको सातौं श्रीङ्खला डाउनलोड गर्नुहोस्
8. आधा बाटोको आठौं श्रीङ्खला डाउनलोड गर्नुहोस्
9. आधा बाटोको नवौं श्रीङ्खला डाउनलोड गर्नुहोस्
10. आधा बाटोको दशौं श्रीङ्खला डाउनलोड गर्नुहोस्
11. आधा बाटोको एघारौं श्रीङ्खला डाउनलोड
12. आधा बाटोको बाह्रौं श्रीङ्खला डाउनलोड गर्नुहोस्
13. आधा बाटोको तेह्रौं श्रीङ्खला डाउनलोड गर्नुहोस्
14. आधा बाटोको चौधौं श्रीङ्खला डाउनलोड गर्नुहोस्
15. आधा बाटोको पन्ध्रौं श्रीङ्खला डाउनलोड गर्नुहोस्
16. आधा बाटोको सोह्रौं श्रीङ्खला डाउनलोड गर्नुहोस्
17. आधा बाटोको सत्रौं श्रीङ्खला डाउनलोड गर्नुहोस्
जगदीश घिमिरेको "अन्तर मनको यात्रा" अडियो भर्सनमा डाउनलोड गर्नुहोस्
"अन्तर मनको यात्रा" जगदीश घिमिरेद्वारा लिखित नेपाली उपन्यास हो । उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुतिसंवेगबाट प्रसारित "अन्तर मनको यात्रा" अच्युत घिमिरेको आवाजमा डाउनलोड गर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।
1. अन्तर मनको यात्राको पहिलो पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
2. अन्तर मनको यात्राको दोस्रो पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
3. अन्तर मनको यात्राको तेस्रो पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
4. अन्तर मनको यात्राको चौंथो पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
5. अन्तर मनको यात्राको पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
6. अन्तर मनको यात्राको छैटौं पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
7. अन्तर मनको यात्राको सातौं पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
8. अन्तर मनको यात्राको आठौं पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
9. अन्तर मनको यात्राको पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
10. अन्तर मनको यात्राको दशौं पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
11. अन्तर मनको यात्राको एघारौं पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
12. अन्तर मनको यात्राको बाह्रौं पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
ब्लगरमा Twitter feed कसरी जोड्ने ?
टुइटर फिड साइटमा राख्ने तरिका :
1. पहिला PC browser बाट Username र Password राखेर आफ्नो ट्विटर एकाउन्ट साइन इन गर्नुहोस् । यदि तपाइले पहिल्यै साइन इन गरिसक्नु भएको छ भने ट्विटरTwitter widget page मा जानुहोस् ।
2. त्यसपछि Profile Widget मा क्लिक गरेपछी विजेटको सेटिङ्ग मिलाउने पेज आउछ । अब तपाइले देखाउन खोज्नु भएको टुइटरको विजेट, अक्षर, लिंक आदिको रंग आफ्नो इच्छा अनुसार परिबर्तन गर्न सक्नुहुन्छ । विजेटमा कति ओटा टुइट देखाउने, कति कति समयमा विजेटलाई रिफ्रेस गराउने, विजेटको चौडाई र उचाई सेटिङ्गहरु मिलाएपछि आफ्नो सेटिङ्गहरुले विजेटलाई कस्तो देखिन्छ भनेर जाँच्न पनि सकिन्छ ।
3. अब Finish & Grab Code क्लिक गर्नुस । बक्सको सबै HTML कोड कपि गर्नुहोस् ।
- यदि तपाई आफुले फेवरेट गरेका टुइटहरु देखाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि Fav Widget क्लिक गर्नुपर्छ । माथीकै तरिकाबाट सामान्य सेटिंङ्ग मिलाएर कोड पाउन सकिन्छ ।
- टुइटरले दिने Search Widget झन् उपयोगी विजेट हो । रियल टाइममा सर्च रिजल्टहरु देखाउन सक्ने भएकोले कुनै शब्द वा ह्याशट्याग खोजी गरेर साइटमा राख्न निकै सजिलो हुन्छ ।
* यी बाहेक List Widget को सहायताले टुइटरको कुनै लिस्टको टुइटहरु देखाउन सकिन्छ । त्यस्तै Follow, Share, Mention र Hastag Button हरु पनि माथीकै तरिकाबाट पाउन सकिन्छ ।
यो पेज (https://twitter.com/about/resources ) खोल्दा Twitter Button क्लिक गर्नु भयो भने त्यहाँ बिभिन्न बटनहरु देख्नुहुन्छ । विभिन्न फर्म्याटमा टुइटरको लोगो चाहिएको छ भने पनि अन्त खोजी रहनु पर्दैन । PNG र bmp लोगो त्यहीँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ । अझ लोगोहरु भेक्टर फर्म्याटमा पनि डाउनलोड गर्न मिल्छ ।
Labels: advance blogger trick, blogger trick, nepali blogger trick, twitter
बुद्विसागरको उपन्यास "कर्णाली ब्लू" अडियो भर्सनमा डाउनलोड गर्नुहोस् ।
"कर्णाली ब्लुज" बुद्विसागरद्वारा लिखित नेपाली उपन्यास हो । उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्रसारण भएको उपन्यास "कर्णाली ब्लुज" को पूरा भाग अच्युत घिमिरेको आवजमा डाउनलोड गर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् ।
1. कर्णाली ब्लुजको पहिलो पृष्ठभूमि डाउलोड गर्नुहोस्
2. कर्णाली ब्लुजको दोस्रो पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
3. कर्णाली ब्लुजको तेस्रो पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
4. कर्णाली ब्लुजको चौंथो पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
5. कर्णाली ब्लुजको पाँचौं पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
6. कर्णाली ब्लुजको छैटौं पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
7. कर्णाली ब्लुजको सातौं पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
8. कर्णाली ब्लुजको आठौं पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
9. कर्णाली ब्लुजको नवौं पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
10. कर्णाली ब्लुजको दशौं पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
11. कर्णाली ब्लुजको एघारौं पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
12. कर्णाली ब्लुजको बाह्रौं पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
13. कर्णाली ब्लुजको तेह्रौं पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
14. कर्णाली ब्लुजको चौंधौं पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
15. कर्णाली ब्लुजको पन्ध्रौं पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
16. कर्णाली ब्लुजको सोह्रौं पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
17. कर्णाली ब्लुजको सत्रौं पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस्
18. कर्णाली ब्लुजको अठारौं पृष्ठभूमि डाउनलोड गर्नुहोस् ।
Download karaoke of maya pirati theno sirmathi
गुरुङ चलचित्र "प्रह्रेँस्यो" (दुलही) को - "मायाँ पिरती थेनो सिरमाथी" भन्ने गितकोको म्युजिक ट्रयाक डाउनलोड गर्नयहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
click on the above mentioned link to download karaoke track of Gurung song - "maya pirati theno sirmathi..."
Do you want to download more karaoke tracks ? Don't worry now, it's one of the best voice among online site which provides many karaoke (music track) for newly flowering singer to improve their singing skill very easily without any cost. Now you can download more karaoke from this site. To download more karaoke click on the picture link given below :
Labels: karaoke, karaoke of gurung song, nepali karaoke
सरु भक्तको नेपाली उपन्यास "पागल बस्ती" अडियो भर्सनमा डाउनलोड गर्नुहोस ।
"पागलबस्ती" सरु भक्तद्वारा लिखित नेपाली उपन्यास हो । उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्रसारण भएको उपन्यास "पागलबस्ती" को पूरा भाग अच्युत घिमिरेको आवजमा डाउनलोड गर्न तलको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस् ।
सरु भक्तको नेपाली उपन्यास "पागल बस्ती" को पूरा भाग अडियो भर्सनमा डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
जगदीश घिमिरेको नेपाली उपन्यास "सकस" अडियोमा भर्सनमा डाउनलोड गर्नुहोस् ।
"सकस" जगदीश घिमिरेद्वारा लिखित नेपाली उपन्यास हो । उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्रसारण भएको उपन्यास "सकस" को पूरा भाग अच्युत घिमिरेको आवजमा डाउनलोड गर्न तलको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस् ।
जगदीश घिमिरेको नेपाली उपन्यास "सकस" अडियोमा भर्सनमा डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
Dancing Soul of Mount Everest | Download Free PDF
बुँद रानाको - "चल्दै छ जिन्दगी"
बुँद रानाको - "चल्दै छ जीन्दगी" को ई-बुक (pdf. format) मा निःशुल्क डाउनलोड गर्नयहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
Labels: गजल संग्रहको ई-बुक
Location: Aadarsh Nagar Tole, Aadarsh Nagar Tole